व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ? जान्नुहोस् साथै शेयर गर्नुहोस् – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ? जान्नुहोस् साथै शेयर गर्नुहोस्
काठमाडौं ।सातामा कम्ती’मा एक दिन व्रत बस्नु स्वास्थ्य’का लागि पनि राम्रो मानिन्छ । तर, व्रत सकि’एपछि मानिसहरु खान नहुने कुराहरु बढी खाएर पनि बि’रामी पर्ने गरेका छन् । दिनभरको व्रत सकि’एपछि व्रतको दिन बेलु’का अन्न खा’न नहुने भनिन्छ । तर, फलफूल र झो’लयुक्त पदार्थ भने खान धार्मि’क छुट छ ।
व्रतको दिनमा प्रश’स्त पानी, फलफूल र फ’लफु’लको जुस खान सकिन्छ । व्रत बस्दा निरा’हार बस्दा राम्रो भएपनि स्वा’स्थ्यमा समस्या हुनेले यी झोलिलो कुरा खान चिकित्स’कहरूले सुझाएका छन् ।
दिनभरको भोको पेटले तत्का’ल कडा खाना पचाउन नसक्ने भएकाले हल्का खाने कुरा खा’न सुझा’इएको छ । लामो व्रतपछि एकैपटक धेरै खानेकुरा खाँदा शारीरिक प्रति’क्रिया उत्पन्न भएर मानिस बेहोस हुन सक्छ ।
व्रतमा बदाम भिजा’एर दुधमा लगाएर पनि खान सकिन्छ । व्रत सकि’एपछि केहि छिन रिलिफ भन्दै कोल्ड डिंक लिने बानी छ भने त्यसले मुटुमा गम्भीर खतरा पैदा गर्छ ।
खाली पेटमा तत्काल चिया पिउनु पनि ठीक नहुने चिकि’त्सकहरू बताउँछन् ।यस अतिरिक्त मस’लेदार खाना पनि खानु राम्रो नहुँने बता’इएको छ । यो बेला रोटी, दाल, भात र त’रकारी नै उत्तम हुन्छ । –खबरहब बाट
Previous विहान उठेर भगवान शिवको नाम जप्दा पनि सपनाको फल नाश हुन्छ । यी हुन् २० सपनाका फल : सबिता आचार्य,,,हेर्नुहोस।
Next ॐ ॐ”व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ?जान्न यो हेर्नुहोस।ॐॐ
“धनतेरसमा यी ५ पहेँलो, वस्तु मध्ये कुनै एक, किन्नुहोस्, घरमा, हुनेछ पैसाको वर्षा”